मनाङका स्याउ किसान भन्छन् : बाटो छैन ,स्याउ बजारमा कसरी पुर्‍याउने ? - Parichaya.com
मनाङका स्याउ किसान भन्छन् : बाटो छैन ,स्याउ बजारमा कसरी पुर्‍याउने ?
By परिचय	 On ३१ भाद्र २०७८, बिहीबार १५:३२ 0
उनका अनुसार एक सय रोपनीका फार्ममा लगाइएको स्याउ मध्ये ३० रोपनी पहिरोले बगाउँदा रु। ४० लाख क्षति भएको छ । उनी जस्तै जिल्लाका आफ्नै बारीमा व्यावसायिक स्याउखेती गर्दै आएका किसान सडक नहुँदा मर्कामा परेका छन् ।
यस पटकको बाढीपहिराले स्याउखेती गर्ने किसान वढी समस्यामा परेका जनाइएको छ । बजारमा स्याउ पुर्‍याउन मुस्किल भएको नासों(८ ताचैका किसान सोलबहादुर गुरुङले बताए । उनले भने, ‘दशैं अगाडिसम्म सडक सुचारु भएमा स्याउ पुर्‍याउन सकिन्छ कि भन्ने आशा जागेको छ ।’
यसैबीच डुम्रे(बेँशीसहर(चामे सडक योजना कार्यालय लमजुङका प्रमुख अच्युत विलास पन्तले सदरमुकाम चामेसम्म असोजसम्ममा सडक सञ्चालन गराउने तयारीमा रहेको जानकारी दिए । मर्मत तथा सम्भार र निर्माण जारी रहेको उनले बताए ।
उनका अनुसार अगामी दशैँ अगावै जिल्ला सदरमुकामसम्म सवारी सञ्चालन गर्ने योजनासहित काम भइरहेको छ । माथिल्लो मनाङ जाने सडक अन्तर्गतको तलेखु–भ्राताङ भीरमा ब्लाष्टिङ गर्ने सबै सामग्री उपलब्ध गराउँदै काम पनि भइरहेको उनले बताए । सो सडकखण्ड एक सय सात किलोमिटरमध्ये लमजुङको बेँशीसहरदेखि नासों गाउँपालिका(१ खोत्रोसम्मको ३५ किमी सडक निर्माण भइसकेको छ ।
राष्ट्रपति र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच २ घण्टा भेटवार्ता